Indawo kagogo - I-Airbnb
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguBlanka
Zipholele uze wonwabele imeko ekhethekileyo kwiflethi etofotofo, ekufutshane nepaki nomgama okufutshane neenyawo kumbindi wesixeko sasePardubice. Kwakhona indawo yokupaka yabucala iyafumaneka xa icelwa.
Ukuba ngabantu abadala sisoloko silibala indlela ebesingenamkhethe kwaye savuya ngayo ngoomakhulu bethu. Sikhangele phambili ekukwamkeleni kwindawo, apho ubomi bomthonyama badibana nobutofotofo obufunekayo ngoku.
Njengabahambi abanamava sikholelwa ukuba siza kukunika yonke into oyidingayo, kuquka ukuzola nokubakho kwakho.
Indawo yethu inazo zonke izixhobo ibe sizama ukuyiphucula ngokoluvo lwakho. Unokufumana amakhulukhulu eencwadi, ubukele iTV okanye uphumle nje kwindawo epholileyo. Sikulungiselele '' ikona yokupheka yembali '' ekhethekileyo, enezixhobo zemveli neendlela zokupheka ebezingekho kwikhitshi likagogo wethu.
Unokutyelela ipaki enechibi, ekumgama wemizuzu eyi-7 kuphela. Ukuhambahamba epakini ungaya kwiziko ledolophu eliyimbali kunye nesikwere esidala kunye nenqaba okanye undwendwele amachibi okuqubha kunye ne-spa. Kukho iividiyo ezahlukahlukeneyo zohambo losuku lonke, ekufanele zityelelwe. Sisekuhlaleni kwaye sikhona ukuze sikunike amacebiso ngeendawo onokuya kuzo nanini na.
Umbuki zindwendwe ngu- Blanka
Siyakuvuyela ukukwamkela kwindawo kaGogo kwaye sikunike kungekhona nje indawo yokuhlala entle kodwa nenkcazelo eza kwenza uhlale kamnandi.
Iilwimi: Čeština, English, Deutsch, Italiano, Русский